Sida Looga Hortago Infekshinka Coronavirus
Novel Coronavirus 2019, Ururka Caafimaadka Adduunka wuxuu si rasmi ah ugu magacaabay 2019-NCOV. markay tahay Janaayo 12, 2020. Coronaviruses waa qoys ballaaran oo fayrasyo ​​ah oo loo yaqaan inay sababaan hargab iyo cudurro aad u daran sida Bariga Dhexe neefsashada (MERS) iyo cudur daran oo neef mareenka daran (SARS). Riwaayad ...
Waa maxay maaddada iyo wax ka samaynta goonnada go'doonka caafimaad?
Cudurka faafa ayaa sababay qalab caafimaad oo kufilan, waxayna dhaqaatiirtu isticmaaleen polypropylene rococo. Kuwani ma huruud, cadaan, buluug, iyo buluug buluug ah oo dhar difaac ah, goonniinno gooni u sooc ah, iyo dharka qalliinka ayaa leh heerar u dhigma Ma isku midbaa? Hoos waxaan isku dayaa inaan kala hadlo kuwan ...
Cudurka faafa ee loo yaqaan 'Covid-19': meeye meelahan kulkulul ee coronavirus-ka adduunka?
Coronavirus wuxuu kusii faafayaa aduunka oo dhan, 31 milyan oo kiis oo la xaqiijiyay ayaa laga helay 188 wadan tirada dhimashaduna hal milyan ayey ku dhowdahay. Lix bilood ka dib markii Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) uu ku dhawaaqay inuu yahay faaf, fayrasku wuxuu ku sii fidayaa dalal badan qaarna waxay u muuqdeen inay ...
Dhimashada urta Coronavirus 'way ka duwan tahay hargabka iyo ifilada'
Luminta urta wehelin karta coronavirus-ka ayaa ah mid gaar ah kana duwan midii uu soo maray qof qaba hargab xun ama hargab, ayay yiraahdeen cilmibaarayaal reer Yurub ah oo bartay khibradaha bukaanada. Marka bukaanada 'Covid-19' ay ur urin la'aanta waxay u egtahay mid kedis ah oo daran. Oo iyagu badanaa ma ...